Ao amin'ny lalao Roulette Club, mila mihodina ny baolina amin'ny kodia izay manana 37 slots. Ny baolina Nijanona amin'ny misy ny slots araka ny fampitsaharana ny kodiarana. Ny tanjona lehibe ny latabatra lalao dia ny araka ny tokony hamantatra izay slot ny baolina dia hitsahatra. Raha manao izany, ny payoff no nahazo eo amin'ny tsato-kazo. Ny haben'ny payoff miovaova ny karazana tsatòka napetraka. Izany no iray amin'ireo tsara indrindra eran-tany mivantana mpivarotra latabatra lalao. LIVE GAMES MENU manan-danja dia tsy maintsy voafidy hanova ny roulette latabatra na mifidiana ny sasany velona hafa lalao. Ny Live Mpivarotra Button mamela anao mba hilalao lalao hafa maro nandritra ny gameplay.
Momba ny Developer ny Club Roulette
Ity lalao ity Powered by NetEnt. NetEnt foana nanome iray mpampiasa interface tsara kokoa ho any amin'ny mpilalao hatramin'ny 1996. Ny fahombiazana goavana ny orinasa dia satria ny lalao mandroso anilany dia tena miavaka ary koa ny lalao rehetra dia azo idirana na aiza na aiza, ary amin'ny fotoana rehetra - finday, Varotra na biraonao - izay mamela anao mba hiaina ny fisian'ny orinasa maro-fantsona.
Tsy maintsy ho efa tsara nahalala ny lazan'ny ny latabatra Lalao tany na ny tany an-tserasera Casino mifototra sy indostria. Rehefa misafidy ny hilalao Roulette Club, dia hanana ny tena fiainana traikefa iray tany mifototra Casino.
Fanteno ny tokony tsato-kazo amin'ny nomena namoly amin'ny alalan'ny fisafidianana ny tsara hilokana saha ao amin'ny lalao latabatra. Ny 'Total Bet' varavarankely mampiseho ny tanteraka loka. Afaka hamerina ny tsatòka napetraka tao amin'ny lalao teo aloha amin'ny fipihana eo amin'ny avereno bokotra. Raha misafidy ny bokotra hamerina ny teo aloha ny loka fihodinana, dia ny Bet ho avo roa heny. Afaka mametraka fiteny maro samy hafa ny filokana eo amin'ny latabatra roulette. Karazana Bet rehetra manarona ny miavaka isan-karazany ny slot isa sy ny payoff manokana dia azo amin'ny alalan'ny karazana tsatòka tsirairay. Ny birao dia ahitana andry sy ny andalana avy ao, izay andry ireo 12 voaisa intsony ny andalana kosa ireo laharana dia asiana ny 3 voalamina fohy tsipika. Ny filokana ao anaty latabatra ity lalao ny 1 dimy karazana ny tsatòka. Afaka mametraka ao filokana ny voalamina slots. Ny ivelany filokana no farany 3 karazana filokana ary afaka mametraka izany ao amin'ny boaty tsy manam-paharoa manolotra ambany.
Roulette Club dia heverina ho toy ny tonga lafatra mpivarotra velona Roulette lalao nasongadina ny NetEnt. Ny tonga lafatra sary faran'izay tsara sy mahavariana mpampiasa interface tsara nampakatra ny raharaha ny mpanatrika.